देउवाको जिब्रोमा कस्ले करेण्ट लगायो ? पहिले यस्तो थियो देउवाको भाषण (भिडियो) – Darshan Nepal News
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/देउवाको जिब्रोमा कस्ले करेण्ट लगायो ? पहिले यस्तो थियो देउवाको भाषण (भिडियो)
देउवाको जिब्रोमा कस्ले करेण्ट लगायो ? पहिले यस्तो थियो देउवाको भाषण (भिडियो)
काठमाडौ। अहिलेको प्रतिपक्षि दल अर्थात नेपालि कांग्रेशका सभापति शेरबहादुर देउवाको आवाज त्यति प्रष्ट हुने गर्दैन। उनले बोलेको नबुझिएर बेला बेलामा उनि आफुनै समस्यामा आउने गर्छन। केहि दिन पहिले राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले शेर बहादुरले बोलेको कुरा केहि नबुझिएको भन्दै मंच बाट नै खिल्ली उडाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
देशको राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेको मान्छेले त्यसरी सार्वजनिक स्थानमा कसै प्रति लक्षित रहेर खिल्ली र मजाक गर्न नहुने भन्दै कतिपय विश्लेषकले पनि राष्ट्रपतिको शैलीको बिरोध गर्दै आएका छन। हरेक मानिसमा केहि न केहि कमजोरी हुन्छ र कमजोरीको कसैले पनि मजाक गर्न हुँदैन भन्दै राष्ट्रपति जस्तो पदमा बसेको मान्छेले यो स्तरमा मजाक गर्न नहुने भन्दै पनि आएका छन कतिपय।
तर अहिले यहि प्रकरण पछी धेरैले जान्न चाहेका छन, शेरबहादुरको आवाज किन त्यस्तो भयो भनेर। हल्ला अनुसार उनलाई राणा कालमा जिब्रोमा करेन्ट लगाईयो भन्ने सुनिन्छ तर वास्तविकता मा त्यो नभएको पुष्टि भएको छ। उनि राणा कालमा जम्मा ३ बर्षका थिए र तिन बर्षको उमेरमा उनको जिब्रोमा करेन्ट लगाउने कुरा सम्भव हुने कुरै भएन।
पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा पहिले भने एकदमै प्रष्ट बोल्ने रहेछन। पुरानो भाषण सुन्ने हो भने यो कुरा थाहा हुन्छ। जवकी २०६२/६३ सालमा देशमा परिवर्तन आउँदा पनि उनले काठमाण्डौको खुलामंचमा गरेको भासणमा उनको प्रष्ट बोलि रहेको छ। उनले त्यति बेला गरेको भाषण र किन शेरबहादुरको आवाजमा त्यस्तो समस्या आयो भन्ने बारे यो छोटो भिडियो पनि हेर्नुहोस:
बिचरा ! हेर्नुहोस बिदेशी जस्तै गोरो देखिने यी नेपाली बहिनिको भित्री पि’डा , सेती भु:त भन्दै मलाई जिस्का’उछन् (भिडियो सहित)
र*क्सीले मातेका मालपोत हाकिमको चर्तिकला (भिडियो)
ज्ञानेन्द्रलाइ दिल निसानी र पुण्यको दह्रो साथ, मेयर रेणु दाहाल र चितवन प्रहरी प्रमुख दानबहादुरले राजिनामा दिनु पर्छ (भिडियो)
रेणु दाहाललाई घरबाट थुतेर बाहिर निकाल्छु, चितवनबाटै बहिस्कार गर्छु भन्दै दिईन ठाडो चुनौती (हेर्नुस भिडियो)